एक परिवार, तीन उमेदवार : तीनैको हार ! | ebaglung.com
एक परिवार, तीन उमेदवार : तीनैको हार !
२०७४ असार २१, बुधबार १९:१६	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार 661 पटक हेरिएको !
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७४ असार २१ । विगतमा सिङ्गो गाविस र वडाबाट समेत दलित समुदायले राजनैतिक दलबाट उमेदवारी पाउन बढो मुस्कील थियो तर अहिलेको संविधानले नचाहेर पनि राजनैतिक दललाई बाध्य पारेको छ ।
त्यसैको शौभाग्य भन्नु पर्छ ईस्मा गाउँपालिका वडा नम्वर ३ मा एकै परिवारका तिन जना उमेदवार खडा गरिएको थियो, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट । तर त्यहाँ नेकपा एमालेको प्यानलले जिते पछि त्यो परिवारका तिनै जना उमेदवारले हार व्यहोरेकाछन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले जेठाजु गुने भन्ने प्रेमबहादुर नेपालीलाई खुल्ला सदस्यमा उठाएको थियो । उनकी भाई बुहारी विना नेपालीलाई पनि सोही पार्टीले खुल्ला सदस्यमै उठाएको थियो । फेरी नेपाली कांग्रेसले अर्की भाई वुहारी तुल्सी नेपालीलाई दलित महिला सदस्यमा उमेदवार बनाएको थियो ।
एक घर दुई पार्टी रहेका उनिहरु एक न एक दलबाट कुनै एक जनाले जित्न पाए पनि धन्य हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राखेका थिए तर दुवै दलले हारे पछि उनिहरुले पनि हारे । साविकको दर्लामचौर गाविस तोरीपाटामा नेपाली थरका दलितहरुको ठुलो वाहुल्य रहेको छ । तर पनि विगतमा समेत त्यहाँ गैह्र दलित उमेदवारले नै जित्दै आएका छन् । दलितले दलितलाई भोट कमैले दिने गरेका छन् ।
जात पनि फरक पार्टी पनि फरक
सोही घरका दम्पत्ति विच जन्मिदाको जात पनि फरक राजनैतिक आस्था पनि फरक परेको छ । माओवादी केन्द्रकी उमेदवार विष्णु नेपाली अधिकारी थरका व्राम्हणकी छोरी हुन् । उनले १० वर्ष अघि छिमेकी विष्णु नेपाली संग अन्तरजातिय विवाह गरेकी थिईन् ।
उनि सुरु देखि नै माओवादी कार्यकर्ता भए पनि उनका श्रीमान विष्णु नेपाली कट्टर कांग्रेस हुन् । राजनैतिक आस्था फरक परे पनि आफुहरुको दाम्पत्य जीवनमा कत्ति फरक नपरेको ती दम्पत्तीले बताए । दुवै खुट्टाकी अपाङ्ग उनकी पत्नी विनालाई उनले बोकेर मतदान केन्द्र सम्म पुराएको र अरु भोट कांग्रेसमा दिए पनि एउटा भोट चाँही श्रीमतिलाई दिएको उनले खुलासा गरे ।
आफु अपङ्गा भए पनि श्रीमानको माया र स्याहर सुसारमा कत्ति कमी नभएको र दाम्पत्य जीवन सुखत रहेको विष्णुले बताईन् । जात पनि फरक पार्टी पनि फरक पर्दा परिवारमा कुनै वेला झगडा हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा विनाले भनिन् –‘यता घर परिवार भित्र कत्ति पनि परेको छैन् बरु माईतीले औधी घृणा गर्ने गरेका छन् ।’
‘१० वर्ष भयो विहे भएको तर एक चोटी पनि माईतीमा पाईला टेक्न पाएकी छैन र बाटोमा भेट्दा समेत बुवाले टाउँको मर्काएर हिड्नु हुन्छ ’ –विनाले थपिन–‘ वुवा आमा नवोले पनि मेरो वोल्ने र बाँच्ने साहरा मैरै श्रीमान विष्णु हुनुहुन्छ , मैले अव माईतीको माया विर्सी सकें , मेरा श्रीमानले विर्साई दिई सक्नु भयो । ’ उनीहरुका तिन सन्तान छन् । आर्थिक रुपले भने उनिहरुको अवस्था दयानिय रहेका छन् ।
गल्कोट नपाका ११ वडाहरुमा योजना तर्जुमा गोष्ठी जारी